China Umatshini wentsimbi osisigxina osisongelayo mveliso kunye nabenzi | YingYee
Izinto:Abebala bentsimbi, intsimbi kwalenza, iAluminiyam yentsimbi
Isantya sokwenza oku:15-20m / min
Isixhobo sokumisa iMetal Seam Machine esongwayo sisebenzisa ulawulo lwe-PLC, amaza e-AC kunye nokulungelelanisa itekhnoloji yesantya, kwaye iyayiqonda imveliso eqhubekayo ezenzekelayo, ke ngoko, luhlobo olutsha lokonga umbane kunye nezixhobo zokuvelisa ezisebenza kakuhle zentsimbi.
I-Decoiler-Isikhokelo sokondla-uMatshini oQhelekileyo wokwenza iRoll- Inkqubo yoLawulo lwe-PLC-Ukusikwa kweHydraulic-Itheyibhile yokuPhumela
Impahla engekasilwa Iikhoyili zangaphambi kokupeyinta, iikhoyili ezihlanganisiweyo, iikhoyili zeAluminiyam
Uluhlu lwezinto eziphathekayo 0.2-1mm
Iiroli 12-20 imiqolo
Shaft ubukhulu kunye nezinto 70mm, izinto ezingama-40 Kr
Isantya ndiyila 10-15m / min
Izinto umatshini blade Isinyithi sokubumba i-Cr12 ngonyango olucinywayo 58-62 ℃
Amandla aphambili emoto 4KW
Amandla e-hydraulic motor 3KW
I-Voltage 380V / 3Isigaba / 5Hz
Ubunzima bebonke malunga neetoni ezi-3
Inkqubo yokulawula I-Omron PLC
U-YINGYEE ngumenzi okhethekileyo kwimishini yokubanda ebandayo kunye nemigca yemveliso ezenzekelayo. Sineqela elimangalisayo elinobuchwephesha obuninzi kunye nentengiso egqwesileyo, enikezela ngeemveliso zobungcali kunye nenkonzo enxulumene noko. Sihlawule ingqalelo kubungakanani nasemva kwenkonzo, ndafumana ingxelo enkulu kunye nembeko ngokusesikweni kubaxumi. Sineqela elihle emva kwenkonzo. Sithumele iziziba ezininzi emva kweqela lenkonzo ukuya phesheya ukugqiba ukufakwa kweemveliso kunye nohlengahlengiso. Iimveliso zethu zithengisiwe kumazwe angaphezu kwama-20 sele enawo. Kwakhona iquka i-US neJamani. Imveliso ephambili:
Iikhathalo zomkhiqizo: Umatshini okhuphisana kunye nezixhobo Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Zonke iiMatshini ezisongelayo ze-Sheet Metal ziqinisekisiwe ngomgangatho. Umatshini wokushicilela wentsimbi osisinyithi Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Iindidi zeMveliso: Umatshini wokuSonga oPhezulu oMileyo
Egqithileyo Iphepha loPhahla oluPhezulu oluPhuma kuMatshini
Okulandelayo: Umbala wentsimbi yeRay Pipe Roll Ndiyila Umatshini
Umatshini omncinci wokwenza umatshini
Ukuma kophahla oluMileyo lwePhepha lokuSebenza loMatshini